Ihe nkpuru ahihia bu nke batching system, system weight, mixing system, electronic control system, pneumatic control system and etc. Uzo ato ato, otu powders, otu mmiri mmiri na mmiri nwere ike ibughari ma kpochaa ya.
Ihe nkpuru ahihia bu ihe ndi ozo, usoro ntanye, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo.
Ntọala enweghị ntọala, enwere ike itinye akụrụngwa maka nrụpụta mgbe emechara saịtị ọrụ ma sie ike. Ọ bụghị naanị belata ụgwọ ntọala ntọala, kamakwa belata usoro nrụnye
-Gbọ okporo ígwè dị elu raara onwe ya nye ihe ọkụkụ ihe ọkụkụ
N'ịnabata elu-arụmọrụ igwekota, elu mmepụta arụmọrụ, na-akwado multiple ụdị fo nri technology, adabara dị iche iche ihe inggwakọta mkpa, na lining mbadamba na UM UBARA ịmụta alloy eyi na-eguzogide ihe onwunwe, na ogologo ọrụ ndụ.
Kwụsị feeder bụ ụdị pneumatic ebu na elu Ọdịdị, o nwere nnukwu arụmọrụ maka ebutu site na iji fluidization na mgbali oriri technology na pụrụ iche fluidized bed.
[Detuo] Onye na-ekewa aja
N'ịnabata agwakọta technology nke drum nkewa na gburugburu echetakwa na nkewa, na n'ihu na sandstone nkewa; na nanị Ọdịdị, ọma nkewa mmetụta, ala iji na-eri na ezi uru nke gburugburu ebe obibi-echebe.
Ihe ngwakọta ngwongwo 4 × 2
Shantui Janeoo amalitela ma mepụta igwekota igwe gwakọtara kemgbe 1980s. O nweela ahụmịhe bara ụba na imewe, nrụpụta na ọrụ ahịa ahịa.
Ihe igwe gwongworo 6 × 4